विचार / दृष्टिकोण Archives - Page 10 of 21
काठमाडौँ- रोजगारीको लागि विदेश जान चाहनेहरुले नेपाल सरकारबाट खुल्ला गरिएका देशहरुमा जान पाउने प्रावधान रहेको छ। नेपाल सरकारले एक सय १० वटा मुलुकमा कामदार पठाउन खुल्ला गरेको छ। प्राय जस्तो …
काठमाडौँ, नेपालमा गरिबको संख्या कति होला भन्ने कौतुहलता सबैलाई लाग्न सक्छ । गत वर्ष गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयले देशका २५ जिल्लामा तीन लाख ९१ हजार ९८७ घरधुरी गरिबीको रेखामुनी रहेको …
यसपालिको दशैँ इतिहासकै महँगो हुन सक्ने ! यी चीजको मूल्य बढ्न सक्छ, हेर्नुहोस्
काठमाडौँ- केहि महिने देखि लगातार डलरको मूल्य बढिरहेको छ। डलरको तुलनामा नेपाली मुद्र रुपैया अत्याधिक कम्जोर हुँदै गएको छ। इतिहासमै नेपाली मुद्रा डलरको तुलनामा कम्जोर भएसँगै नेपाली अर्थतन्त्रमा सिधा असर …
हुदै नभएको सबुत उत्पादन गर्दै फेक-सबुत र फेक-इन्काउन्टरको आडमा कानुनको यसरी उडाईदैछ धज्जी !
भदौ २६, २०७५ बिगुल
काठमाडौँ- गत साउन १० गते कञ्चनपुरमा बलात्कार पछि हत्या भएकी निर्मला पन्तको हत्यामा संलग्न भएको भन्दै सार्वजनिक गरिएका दिलिपसिंह विष्ट साधारण तारेखमा छुटेका छन् । उनि मात्र नभई अनुसन्धानको लागि …
भदौ २५, २०७५ बिगुल
सरोज दाहाल(बिगुल न्यूज) काठमाडौँ- बि।सं २०६२/२०६३ को जना आन्दोलनले देशको राजनीतिक व्यवस्था मात्र फेरेन सँग-सँगै सामाजिक र भौगोलिक रुपमा निकै ठुल-ठूला परिवर्तन ल्याइदियो। आम-नेपाली जनताले त्यतिबेला अधिकार र न्याय खोजेका …
“”हरेकले गर्छन् कल्पना , अनि हर कोहि डुब्छन् सोचमा । बस फरक यति छ ! कोहि सोचरुपी भवसागरमा डुबुल्की मारेर उत्रिन्छन्, त कोहि त्यसलाई बेफिक्री शब्दमा उतार्छन् । अन्त्यत, ति …
काठमाडौँ- देशमा रोजगारीको समस्या भएको कारण नेपालबाट वैदेशिक रोजगारको लागि वर्षेनी करिब ४ लाखको हाराहारीमा युवाहरू विदेशिने गर्छन्। सरकारले देश भित्रि रोजगारीको अवसर शिर्जना गर्ने भनेता पनि विदेशिने युवाको संख्यामा …
साउन २८, २०७५ बिगुल
– मेनुका थापा यौनकर्मलाई नेपाली कानुनले निषेध गरेको छ। त्यसैले यौनकर्मीको सजिलै पहिचान हुन गाह्रो छ, यहाँ। मैले बाध्यतावश यौनकर्म र यौनजन्य गतिविधिमा लागेका महिलासँग काम गर्ने निधो गरेँ। सकेसम्म …
रमेशप्रसाद तिमल्सिना किरिङकिरिङ………………….को आवाजसँगै मोटरसाइकल छेउ लगाएर टक्क अडिएँ । निर्मलजीको फोन रहेछ । फोनमा बातचित भयो । बिहिबारको दिन थियो त्यो । त्यसपछि कार्यालय गएँ । मेरो कामको गति …
भारत–चीनबीच भिडन्त भए नतिजा कति खतरनाक ?
साउन २३, २०७५ बिगुल
भारत र चीनबीच बढ्दो तनावबीच कैयौँ यस्ता प्रश्न छन्, जसले भारतलाई चिन्तित बनाइरहेका छन् । चीनको सामना गर्न भारतको तयारी कस्तो छ ? यसैबीच लोकसभामा मुलायमसिंहले भने कि चीनले भारतमाथि …
७ सेकेन्ड अगाडि पत्रपत्रिका